Soo dejisan Microsoft PowerPoint 16.0.13029.20182 – Vessoft
AndroidXafiiskaSoftware softwareMicrosoft PowerPoint
Bogga rasmiga ah: Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint – codsiga ah oo caan ah si ay u abuuraan iyo bandhigyo edit. Mid ka mid ah feature ee software-ka waa awood u leh inay wax ka bedel iyo qaabka faylasha waxa ku jira oo la badbaadiyey qalabka wax. Microsoft PowerPoint ku siinayaan shaqada sanamyadooda, miisaska, gooldhalinta, isku dhafan videos, animations iwm software wuxuu kuu ogol yahay in ay is dhaafsadaan natiijada shaqada diraya bandhig ama hyperlinks by email. Sidoo kale Microsoft PowerPoint u saamaxaaya in ay dib u bilaabaan shaqo ay ku soo bandhigidda meel ugu dambeeya ee jarida, iyadoo aan loo eegin qalabka looga faa’iideysan. Microsoft PowerPoint leedahay qaybo ah oo fudud aad maskax ahaan interface iyo navigation caadaysi oo la filaayo in ay gacanta ku taabto.
Samaynta, Iyo La xaalkaa bandhig
Set Great qalabka iyo muuqaalada
La jaan qaada qalabka wax
Soo dejisan Microsoft PowerPoint
Faallo ku saabsan Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint Xirfadaha la xiriira
Tool in microblog oo fariin sarrifka ee shabakada bulshada ee caanka ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto iyo faallo qoraalada.